Fitsapana an'i Kubuntu, lavitra ny tanan'i Canonical | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fisehoana / personalization, Fitsinjarana, GNU / Linux
Omaly aho nametraka Kubuntu 12.04 ao amin'ny Netbook any am-piasana, noho ny KDE 4.10 izay andramako dieny izao ary hatreto dia tsara, hoy aho tsara: Saika Lavorary !! .. fa toy ny mahazatra, tsy ny rehetra no mailo.
Mamelà ahy hanazava zavatra alohan'ny hanohizako manoratra: Tsy manan-javatra manokana amin'ny Canonical aho, ary mainka ny an'i Mark Shuttleworth, tovolahy izay tiako ihany tamin'ny farany. Fa ny tena izy dia tsy ny zava-drehetra nokasihain'ny Canonical no lasa volamena. Ary manana ny porofo isika ao Kubuntu y Xubuntu, izay hatramin'ny nandraisan'izy ireo ny tanan'ny Vondrom-piarahamonina, dia tsy azo resena ..
Raha tsy matahotra ny ho diso aho dia afaka milaza izany Kubuntu 12.04 Io no kinova farany nanandramako an'ity fizarana ity. Mazava, KDE 4.8 mametraka ny mikasika izay ilaina, fa tsy isalasalana fa ny fiaraha-miasa BlueSystem nanome valiny tena tsara izany.
Misy zavatra tsy tiako ary mazava ho azy fa mandady Debian y Ubuntu: Ireo fonosana meta. Mbola tsy nanandrana aho, fa te hanao fametrahana Instinstallation raha hijery amin'ny alàlan'ny fametrahana izay ilaiko dia afaka manala zavatra amin'ny Kubuntu izay tonga implicit ary mahatonga azy hiadana kely, raha oharina amin'ny Debian.
Zavatra iray hafa izay tsy dia tiako loatra ny fanatsarana ny fampidirana Nepomuk + Akonadi izao raha mikasika ny baolina ampy izy. Ao amin'ny KDE 4.8 Nofoanako ilay izy Nepomuk ary tsy nisy olana, fa ankehitriny kosa Kmail, ilaina koa .. diso KDE, tena ratsy. Ary indraindray aho mahatsapa Kmail miadana kely, na dia miaraka amin'izay aza, mihatsara amin'ny zavatra hafa.
Raha tsy izany dia hatsaraina ny fampisehoana, indrindra amin'ny Dolphin rehefa manokatra lahatahiry azo alefa mialoha. Nohatsaraina kely ny sangan'asa, saingy mbola hisy lohahevitra kisary tsy hita ho an'ny lovia araka ny lokon'ny Air.
Tiako ny safidin'ny menio fisakafoanana, satria azo apetraka ho bokotra eo amin'ny tsanganana lohateny eo am-baravarankely, na eo an-tampon'ny birao araka ny ahitanao an'ity sary manaraka ity. SY Firefox mitambatra tonga lafatra, fa tsy Rekonq 😛
Izaho koa dia manolotra olana amin'ny Wifi, zavatra misy Debian Tsy nitranga tamiko izany, heveriko fa mila fanavaozana izany na ho sendra izany tamin'ny fotoana nampiasana azy dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Mazava ho azy, tsy afaka mampitaha ireo fonosin'i Wheezy amin'ireo an'ny aho Ubuntu 12.04.
Mikasa ny hijanona andro vitsivitsy eto aho, hizaha toetra na miandry azy ireo hahavita an'izany KDE 4.10 en Debian na jereo raha sendra izany aho PCBSD.
Ny azoko lazaina dia izany Kubuntu dia eo anelanelan'ny fizarana mpomba ny KDE izany izao dia afaka manoro hevitra aho. Manantena aho fa kanônika tena apetraho tsara ny tananao, ary manohiza manohana hatrany amin'ny resaka Hosting sy ny hafa ... ary koa, raha afaka mangataka zavatra aho, dia Kubuntu hisaraka amin'ny Ubuntu sy ny toerana anaovany izany. Ny tiako holazaina dia hoe inona no mitranga Chakra, Manjaro na mitovy .. fa tsy ny zava-drehetra no azo atao eto amin'ity fiainana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Fitsapana an'i Kubuntu, lavitra ny tanan'i Canonical
Heveriko fa ny kinova 13.04 dia havoakan'ny fiarahamonina tanteraka, tsy azoko antoka izany.
Heveriko fa ny olan'ny wifi lazainao dia ankapobeny amin'ny kinova KDE vaovao. Farafaharatsiny ao amin'ny Chakra, izay vao nohavaoziko, nandany ora maro nanandrana nampifandray azy io tamin'ny tamba-jotra trano sy asa aho.
Mino aho fa tsy afaka mampitaha Kubuntu miorina amin'ny KDE 4.10 sy Kubuntu ianao amin'ireo kinova taloha, satria mazava ho azy fa nihatsara be ny KDE.
Ka ny filazana fa nandroso i kubunstu noho ny nifindrany niala tany Canolical dia tsy hitako izay dikany, satria noho ny fivoaran'ny KDE, mihoatra noho ny antony hafa.
Nahavita fanatsarana ny lahatsoratra avy amin'ny KDE 10.10 aho fa tsy avy amin'ny ekipa kubuntu.
Eny, efa nanandrana ny kinova KDE sy Kubuntu teo aloha aho, ary tsy niasa tsara izy ireo na dia tamin'ny fizarana hafa aza. Ny tiako holazaina dia manampy betsaka amin'ireo fanatsarana ireo ny KDE 4.8 / 4.10, saingy tsy dia nahasarika ny sain'ny Kubuntu taloha ihany koa.
Ireo avy ao amin'ny BlueSystems dia manao distro ara-barotra antsoina hoe NetRunner mifototra amin'ny Kubuntu, ka izany dia ho fifandraisana toa an'i Fedora-RHEL, fa miaraka amin'i KDE. Tena tsara ho an'i Kubuntu fa nitranga izany.
PCBSD no nomenao anarana, ny marina dia mbola tsy nanandrana azy mihitsy aho, fa ny fanontaniako dia, inona ny tombony azony noho ny linux?
Ny rehetra ary tsy misy: PC-BSD dia FreeBSD + KDE SC efa napetraka mialoha - na dia mino aza aho fa mamela ny birao hafa hapetraka ihany koa izao.
Mahaliana ny FreeBSD noho ny endrika fampivoarana sy ny lova Unix saingy tsy mitovy amin'ny GNU / Linux ny mametraka an'io:
Raha mila rafitra mafy orina sy mafy orina ianao ary tsy zava-dehibe amin'ny fanavaozana ny faritra rehetra ny fanavaozana dia ampiasao ny FreeBSD, raha mitady ny hafa ianao GNU / Linux.
Aza adino koa fa ny FreeBSD dia tsy misy na aiza na aiza akaikin'ny fanohanan'ny HW izay ananan'ny GNU / Linux, izay amin'ny distros toa an'i Ubunbu na Fedora dia resaka fampifandraisana fitaovana USB ary miasa amin'ny fotoana voalohany izy ireo (tsara lavitra noho ny Windows!).
Farany, ny fotoana nanandramako PC-BSD 9.0 dia nivadika ho rafitra mavesatra, marokoroko, tsy feno, sarotra, tsy dia mahazo aina ary mazava ho azy fa mpitantana fonosana sary ilay izy, angamba nihatsara tamin'ny fotoana farany.
lahatsoratra tsara indray mandeha indray :). Ankehitriny, mamporisika anao aho hanandrana ny openSUSE 12.2 amin'ny KDE.
Ho an'ny fanamboarana azy dia manoro hevitra anao aho hampiasa ny lahatsoratro avy amin'ny taringa:
Jereo, izaho no Debianero ary ny fonosana .deb no ronono, saingy rehefa nisedra an'ity distro ity aho dia tsy maintsy niaiky fa ny OpenSUSE no tsara indrindra amin'ny KDE sy amin'ireo toeram-pivarotan-tsaina mahamenatra. Fehezan-dalàna iray .. Ny zavatra azoko tamin'ny Debian dia tsy very ao amin'ny openSUSE fotsiny amin'ny fampidirana ireo repo an'ny fiarahamonina .. Raha ny fitoniana dia eo anelanelan'ny Debian stable sy ny fitsapana izany, fa miaraka amin'ireo rindrambaiko nohavaozina kokoa.
Ny fametrahana ny KDE 4.10 dia tsy olana amin'ny fampidirana ireo repo ofisialy ireo:
zypper dup – avy amin'ny KDE410 – avy amin'ny KDE410Extra
Vonona, efa manana KDE 4.10 🙂 ianao
Miarahaba an'ireo Linuxeros rehetra 🙂
Eny tokoa, ho ahy ny OpenSUSE dia tsy misy faharoa. Ary ny lohahevitra plasma an'ny Openuse dia tonga lafatra. Saingy mamporisika anao aho hiandry ny openuse 12.3 miaraka amin'ny KDE 4.10, izay hitako mahatalanjona. 🙂
Tiako foana ny birao KDE ary tato ho ato aho dia nanandrana ny Kubuntu 12.04 sy 12.10 hahitana hoe iza no nandao ny fotony ary nijanona tamin'ny kinova 12.10 aho na dia kely aza ny fotoana anohanana azy nefa mandeha tsara lavitra noho ny 12.04; toy ny raha manandrana 13.04 na 13.10 na 14.04 aho avy eo ary tiako kokoa izy ireo satria apetrako izy, tsy dia manahy firy momba ny ora fanampiana (LTS) aho.
Vao haingana aho no nisedra ny Kubuntu 12.10… tsy naharitra 2 andro. Toa mendrika ahy tamin'ny ankapobeny izany, fa raha ampitahako amin'ny Chakra dia tsy miankina amin'ny voditongony akory izany. Eny, ao Chakra dia mbola mila manao zavatra miaraka amin'ny console isika, saingy tsy zavatra hanoratantsika an-trano izany. Ny nahatonga azy dia ny faharetan'ny fametrahana fonosana rehetra, tsy mitombina!
Amin'ny ankapobeny dia distro tsara izy io, ary mitsiriritra ny habetsaky ny fonosana ao amin'ny trano fitahirizana (na dia tsy maro no ampiasain'Andriamanitra), fa amin'ny maha distro KDE ahy, araka ny hevitro dia manana tombony lehibe i Chakra.
"Ny nahatonga azy dia ny faharetan'ny fametrahana fonosana rehetra, tsy mitombina!."
Satria efa zatra Chakra mandova ny hakantony sy ny fahazavana entin'ny mpitantana fonosana Pacman ianao. Kubuntu amin'ny lafiny iray dia tsy maintsy miatrika dpkg sy .deb, alaivo sary an-tsaina 😛
Sendra ny lohahevitra Firefox asehon'ilay pikantsary dia FXChrome?
Etsy ankilany, nandritra ny fahavaratra lasa dia nampiasa Kubuntu aho ary niaina olana tamin'ny Wifi ihany koa, indrindra tamin'ny karatra tsy misy tariby Broadcom (izay ilay ampiasain'ny solosaina findainy), ary ny fomba hamahana azy dia amin'ny fametrahana ny fonosana «firmware-b43-lpphy -installer ». Avy tany aho dia tsy nanana olana hafa.
Zavatra iray tena nahaliana ahy indrindra ny tsy nipoitra tao anatin'ny safidy fanakatonana KDE ny safidy Hibernate.
«Nepomuk + Akonadi izao raha mikasika ny baolina ampy izy. Tao amin'ny KDE 4.8 dia najanoko ny Nepomuk ary tsy nisy olana, fa ankehitriny ho an'ny Kmail dia ilaina ihany koa .. ratsy ny KDE, ratsy loatra. Ary ny zava-misy dia tsapako fa somary miadana kokoa i Kmail indraindray, na dia miaraka amin'izay aza dia mihatsara amin'ny zavatra hafa izany. »
Tsy maintsy miandry ny safidy maivana vaovao mitovy amin'ny Postler izay novolavolain'izy ireo ho an'ny KDE 🙁 izahay
Ho an'ny anjarako, Nepomuk + Virtuoso + Strigi (+ karoka semantika KMail + Dolphin + zavatra hafa rehetra) dia tanteraka amin'ny 4.10 mamirapiratra vaovao ao amin'ny Arch x86_64 (i5 480, 2.67Ghz, RAM 8Gb).
«Manana olana amin'ny WiFi ihany koa aho, zavatra tsy nanjo ahy tamin'i Debian»
Hmm, angamba mety hanana olana amin'ny ho avy ianao miaraka amin'i Debian rehefa manavao ireo modely WIFI na ny olana dia ny fampiasana ny * buntu an'ny mpamily Windows amin'ny alàlan'ny ndiswrapper 0_0
Manaiky ny zava-drehetra miaraka amin'i Elav aho. Heveriko fa i Kubuntu no tsara indrindra ary afaka manome bebe kokoa aza. Nanatsara be ny fitoniana sy ny hafainganana. Izaho koa dia mazoto amin'ny PCBSD. Mampalahelo fa ny kinova farany nataoko, andiany 9, dia niteraka tahotra kernel nandritra ny fametrahana azy, ka tsy afaka nanohy aho. Mbola miandry asa io.
Koa satria i Elav dia nijery haingana ny PC-BSD, tsara raha misy olona manam-pahalalana momba an'io OS afaka manoratra lahatsoratra io. Raha toa ka mandeha amin'ny karazana fitaovana rehetra.
"Ary koa raha mihazakazaka amin'ny karazana fitaovana rehetra izy."
Mazava ho azy fa tsia, amin'ny horonantsary Celeron miaraka amin'ny chipset VIA sy horonan-tsary OpenChrome dia tsy misy fomba hanombohana ny X.
Amin'ny solosaina finday antenatenan'ny 2011 dia tsy misy fomba hahitana ny lakilem-pifandraisana sy haavo ary haino aman-jery.
Ny fametrahana PC-BSD dia tsara kokoa, mandritra ny androm-piainana, ny fametrahana FreeBSD ary hanangana ny rafitrao, Total FreeBSD dia rafitra famotsorana mba tsy mila hamerenanao ny fotoana rehetra na farafaharatsiny hiampita ny rantsan-tànanao ary hikasika hazo mandritra ny fanavaozana ny kinova taloha ho amin'ny maoderina.
Misy tetikasa mahaliana ao anaty incubator, ArchBSD izay mampanantena FreeBSD maoderina sy azo ampiharina kokoa, ho hitantsika ny fomba fivoarany.
Manoro hevitra anao aho hijanona ao amin'ny linux, hamafana ny BSD aho hatramin'ny nivoahan'ny Chakra ISO vaovao 🙂
Tsara raha nanazava amin'ny antsipiriany kokoa ianao fa tsy tianao PC-BSD.
Asma dia hoy izy:
Eny, hampiasa ireo rindrambaiko mitovy amin'ny Linux ianao ary tohanan'ny Linux kokoa izy ireo.
Mamaly ny Asthma
@elav Probá Mageia2. Tsy nanapa-kevitra ny hanandrana mihitsy aho mandra-panodiko ny solosaina finday ary nanomboka nanana olana an'arivony tamin'ny distro aho, andao hiteny hoe "pop more". Ny marina, amin'izao dia mandeha tsara aho. Mazava ho azy, manandrama misintona ny dvd.iso, avy eo, ankoatry ny fanavaozana ilaina dia tsy mila mikasika na inona na inona ianao, na dia mpamily maromaro aza no tafiditra ao anaty DVD izay ampiasaina ho toy ny repo.
Inona ny distro KDE amporisihinao amin'ny netbook taloha. Ram 1gb, IntelAtom, GMA 450?
Manoro hevitra an'i Debian aho
Tuxito dia hoy izy:
Amin'izany fitaovana izany dia tsy hanome soso-kevitra ny distro KDE aho, manoro hevitra iray aho miaraka amin'ny tontolo birao maivana kokoa. Xubuntu 12.10, ohatra.
Mamaly an'i Tuxito
Jiro, maoderina, voarindra tsara ary ambonin'izany rehetra izany, distro haingana be?
Debian miaraka amin'ny KDE voavolavola dia mihazakazaka tsara any, fa tsy te handany ny gig ny ram amin'ny birao, birao ary browser ianao, mamporisika anao aho handeha amin'ny lafiny hafa amin'ny zaridaina ary hametraka icewm sy ny fototra, na lxde raha tsy eo am-pitiavana ny mianatra icewm .
Raha orinasa hafa io, dia hitsentsitra ny ba kiraronao ianao fa satria ubuntu ... ilay zavatra mitovy foana dia tsy mety manao zavatra mety mihitsy.
Ka Canonical tsy manao zavatra mety mihitsy!?
Izany no antony mahatonga ireo lahatsoratra GNU / Linux ao amin'ny Google Ubuntu!
.ny Instagram dia namolavola ny rindrambaiko namidiny an-tapitrisany dolara tamin'ny FB noho ny Ubuntu
.dia lasa mpizara Ubuntu ilay SUSE Enterprise Linux sy RHEL (tsara ny Landscape)
.Ny Ubuntu sy Ubuntu Server dia manamarika saika ny HW ivelan'ny tokana efa misy ao anatin'izany ny peripheral azonao eritreretina hampifandraisana azy.
ny Ubuntu Phone dia mampanantena fa SWEEEEET ary safidy azo ampiasaina amin'ny Android natsangana tany Java (AJJJJ)
. fa misy kinova ofisialy Ubuntu iray novolavolaina mba hivezivezy amin'ny ARM, noho izany dia ho afaka hapetraka amin'ny takelaka maro izy ary hampiasaina ho solosaina birao tena izy.
.ny Firaisankina taorian'ny nanomezana olona adala an'arivony hameno ny vavany miaro azy izao dia lasa iray amin'ireo tontolo ivoana GNU / Linux lehibe.
.koa noho ny fifanarahana nifanaovan'i Canonical tamin'i Valve dia manana Steam izahay tsy ao amin'ny Ubuntu ihany fa amin'ny sisa amin'ny distro GNU / Linux.
Eny mazava ho azy, tena manao zavatra tsy mety tokoa i Canonical, loza izany!
Ny korontana dia Kubuntu, fantaro, Linux Mint KDE dia miorina amin'ny fototra mitovy amin'i Kubuntu, izany hoe Ubuntu, ary mamirapiratra.
Avelao hazava fa Kubuntu ny loza ary ireo izay mitanatana vava nefa tsy manana fahalalana ilaina hiarovana ny fitakiany.
Mora ny mitsikera, misy mediocre manao an'io, ny sarotra manamarina.
Hey hey milamina, isika rehetra dia manana dingana izay hiarovantsika ny loko distro rehefa manomboka isika, ary iray hafa izay itsikeranay izay rehetra miafara amin'ny * buntu, satria fotsiny ny olona milaza fa ho an'ny vao teraka izy ireo ary miaraka aminy isika.
Saingy mihamatotra isika avy eo, ary avy eo manao fanehoan-kevitra mifanaraka.
Fanitsiana: "ho an'ny olona vaoXNUMX" dia "ho an'ny olona vao avy novambra."
Eny, mety ho, +1, fandinihana tsara.
Eny, mampiasa mahery ny Kmail aho ary novonoiko i Nepomuk, satria nampandeha ny pc-ko izany, ka raha izao dia ilaina ny fampandehanana an'i Nepomuk hampiasa Kmail, tsy maintsy mieritreritra ny hampiasa mpanjifa hafa aho ... Toa nahafaty ahy izany ...
Torohevitra ho an'izay mampiasa ny KDE 4.10. Mampiasà nepomuk indray. Naverina naverina nosoratana tamin'ny ZERO, nesorina ilay horonan-tsarimihetsika, nanjary mandalo roa izy izao, ny iray izay anaovany index amin'ny alàlan'ny filename, ary ny iray kosa amin'ny alàlan'ny atiny ... ary ankehitriny dia miasa ihany izy rehefa mikasika azy, ary koa, tena ilaina mihitsy aza (apetraho ny kioslave an'ny nepomuk tags: // amin'ny feso feso dia ho hitanao ny tiako holazaina). Omano ny fitaovana hitrandrahana marika amin'ny horonan-tsary, sns ... ho an'ny nepomuk, izay tena milay ...
Hanombohana mampiasa nepomuk araka izay nokendren'Andriamanitra tao amin'ny KDE 4.10, araho ireto dingana ireto:
1) Alefaso ny mpanadio nepomuk. Tena ilaina ny manomboka amin'ny rangotra. Mikaroha ao amin'ny menio 'Nepomuk Cleaner' na amin'ny alt + f2 (krunner).
2) Amboary ny nepomuk. Manana tabilao iray hafa ianao izao: 'Indexing', ahafahanao manamboatra ny antsipirihany isan-karazany, toy ny:
- ny karazany (antontan-taratasy, feo, sary)
- mandroso kokoa (amin'ny karazany MIME, amin'ny sarontava)
- Amin'ny alàlan'ny lahatahiry (efa teo io iray io)
Ho anao izay manana kilema nepomuk (toa ahy) dia andramo amin'ny 4.10, satria heveriko fa nanomboka ho fitaovana tokony hananany izy io.
ka tsy misy miandry azy hamita ny asany nepomuk?
Amin'ireto solosaina finday intel misy sary nvidia ireto dia apetraho osx XDD ary ajanony ny xd an'ny bsd's
Pan ity no hw ko
afaka mametraka osx aminy ve aho ??? azonao atao ve ny manome lesona momba ny fametrahana azy? tsy miteny anglisy aho ii
Mamaly ny asma
"Azoko apetraka ao ve ny osx ???"
Tsia, ny MacOS dia miasa amin'ny HW vita sonia ihany.
Na dia misy aza ny hacks MacOS (antsoina hoe 'Hackintosh') azo inoana fa azo apetraka amin'ny HW Intel rehetra, dia mampahafantatra anao hatrany aho fa miady am-pahavitrihan'i Apple izy ireo satria ny fahazoan-dàlana amin'ny rafitra miasa dia tsy mamela ny fampiasana ireo hacks ireo amin'izany. ary noho izany ny fanitsakitsahana ny rafitra fananana toy izany dia fandikana lalàna.
Raha azony atao dia raha zavatra ara-dalàna na tsia dia zavatra hafa, manana tutorial an-taonina ao amin'ny google ianao ary mora harahina. Mandika lalàna koa ny fikandrana fanapahana.
"Raha afaka ianao,"
TSIA, TSY AZONAO.
Efa nanandrana nametraka MacOS tamin'ny DVD tany am-boalohany ve ianao? Nipoaka tampoka akory aza izany?!
Ny fomba tokana hametrahana MacOS amin'ny PC tsy misy sonia dia amin'ny alàlan'ny fampiasana kopia voavaky-tsy ara-dalàna-.
Miala tsiny fa mbola diso ianao, ny pc-ko dia hackintosh misy intel i5, ary raha mipoaka izy io, kopia iray tany am-boalohany, avy amin'ny echos ary mijery tonymac ianao dia hahita ny fomba hametahana azy lavanila, mila manana chamaleon bootloader fotsiny ianao amin'ny olan'ny efi fa mila ny sisa amin'ny zavatra, amin'ny PC dia miasa * toy ny hatsarana * tsy misy fanovana izy io. Ampandalovinao amin'ny pendrive fotsiny ny iso izay ividiananao 20 euro, apetaho ilay chameleon ary apetraho.
Tsy mieritreritra ny tanjon'ny famakafakana aho, inona no tsy itovizan'ny zava-bitan'i Kubuntu sy ny zava-bitan'i KDE?
Ny fanatsarana lazainao dia mahazatra an'ny KDE 4.10, noho izany tsy mitombina ny fampitahana azy ireo amin'ny kinova Kubuntu taloha tantanan'ny Canonical.
Ho ahy dia mazava ny elav ao amin'ny lahatsorany, manondro mazava ny fampiasana ny Kubuntu ho distro izy fa tsy amin'ny faritra tsirairay amin'ireo singa ao aminy.
Ary koa, Kubuntu dia manana ny kinova rindrambaiko mitovy amin'ny distro maro hafa koa tsy misy tombony na fatiantoka amin'izany.
Kubuntu no famaritana ny kibo, tsy misy hafa noho izany. Raha mijery '»mibontsina» ianao amin'ny rakibolana anglisy, dia jereo fa iray ihany ny famaritana: Kubuntu.
Mitovy aminao ihany ny lazaiko anao toy ny tamin'ny hevitra iray hafa etsy ambony:
Raha ny momba an'i Ubuntu, tsara ny fahafantarana ny tontolo mahafinaritra an'ny GNU / LINUX, saingy manome ahy olana eo amin'ny lafiny fitoniana izy io, hany ka saika hivadika amin'ny kinova Linux-Debian an'ny Linux aho, izay tena mampanantena.
"Ary manana ny porofo isika ao amin'ny Kubuntu sy Xubuntu, izay hatramin'ny nandraisan'izy ireo ny tanan'ny The Community, dia tsy voavaha". Ry andriamanitro andriamanitra, fandalinana vao novakiako. : NA
Azoko fantarina ve ny antony?
Raha ny fijeriko azy dia milaza izy io satria ny fizarana ataon'ny orinasa toa ny Canonical na ny Community dia mitazona izany dia tsy midika hoe ny voalohany dia ratsy kokoa noho ny faharoa na ny faharoa dia tsara noho ilay voalohany.
Ho famaranana, ny fitazonana ny fiarahamonina dia tsy mahatonga azy io ho tsara lavitra noho ny distro hafa (na ilay iray aza) tazomin'ny orinasa iray, io fehezan-teny io dia milaza fa ho an'ny sasany:
Orinasa → Diablo
Fiaraha-monina → Andriamanitra
Rehefa tsy izany.
Ny olana Thunder dia amin'ity tranga ity dia tsy milaza aho fa ny orinasa dia Devoly, fa i Canonical dia nanana an'i Ubuntu foana teo imasony, ary kosa ny Unity, ary kosa izay rehetra hitantsika ankehitriny miaraka amin'ny Ubuntu Phone, ary noho izany, raha ny fijeriko azy dia tsy nanisy ezaka akory ry zareo tamin'ny ambin'ny * buntu. Ary azavaiko, azoko tsara ny toeran'ny Canonical, saingy voaporofo fa rehefa miezaka ny The Community dia afaka mahatratra zavatra tsara kokoa noho ny orinasa maro.
Ankehitriny dia nohazavaina tsara ny zava-drehetra, ary zaraiko ny toerana misy anao 100%
“Tsy izay rehetra voakitika Canonical no mivadika volamena. Ary manana ny porofo isika ao amin'ny Kubuntu sy Xubuntu »
Ary tena marina izany ... Avy amin'ny Xubuntu aho ary tsy misy olana 😉
Nanokatra varavarana ho ahy tao amin'ny linux i Kubuntu ary nampiasa azy io nandritra ny herintaona mahery aho ary nianatra zavatra betsaka, namelona ahy ny fankafizan'ny rindranasa KDE sy QT io. Ny iray hafa izay tena tiako indrindra dia ny debian, ampiasaiko amin'ny lozisialy micro lafo be io, io no tsara indrindra. Ao amin'ny biraoko PC Chakra 😀 mampidina ny distro tsara indrindra KDE.
Izaho dia tao amin'ny GNU / Linux nandritra ny herintaona latsaka. Hatreto aho dia nanandrana ny Ubuntu, Mageia 2, OpenSuse, Debian, ary nijery ireo LiveCD marobe, fa ny hany tokiko tena ahazoako aina ary tsy nanana olana dia ny Kubuntu, ilay ampiasako izao na eo aza ny mpampiasa mpampiasa . KDE no tsara indrindra.
Ah elav aza mamporisika distros izay misy ifandraisany amin'ny .rpm dia milaza fa BOOOOM! ny pc-nao efa eny: p
Fanamarihana tsy misy dikany, tsy misy ifandraisany amin'ny Canonical (izay tamin'ny farany dia tsy nahavita mihoatra ny famindrana ny famatsiam-bola amin'ny orinasa iray hafa, satria mbola mitovy ny mpanavao ny Kubuntu, ampy izay ny manodidina an'i Launchpad mba hahatsapa sy izay saika manana safidy malalaka foana, satria Canonical fotsiny nanohana tetikasa tsy Ubuntu) ny zava-misy fa Kubuntu dia toy ny misy, raha nahatratra ny ambaratonga izay misy azy, dia noho ny fivoaran'ny KDE sy ny fototry ny Ubuntu izay manana, araka ny efa nolazain'izy ireo tamin'ny hevitra teo aloha (tsy rariny ny mampitaha ny KDE 4 na 4.2 amin'ny KDE 4.8 na 4.10 ankehitriny.
Ary misaotra betsaka fa TSIA, antenaiko fa tsy toa an'i Manjaro na Chakra velively izany ary ho anao dia manantena aho fa hitohy ny Kubuntu hatrizay ary izay nisy hatrizay, na dia tsy te hanaiky izany aza ny Taliban anti-Ubuntu-Canonical.
Fa hey, ny naoty dia vita amin'ny "elav", tsy afaka miandry intsony ianao, toy ny fangatahana pears amin'ny hazo elm.
Inona no holazaiko aminao nefa tsy mandany fotoana? Ah fantatro Enga anie ianao hanana ireo "baolina" hiantso ahy ho donto amin'ny tavako ...
Indray mandeha nisy olon-kendry nilaza hoe: «aza fahano ny troll» ...
Milamina elav, tadidio ny "Raha moka ny alika dia famantarana fa mitaingina isika"
Elav, toy ny maro aminay, misaotra anao fotsiny izahay noho ny bilaoginao, indrindra ireo lahatsoratra fenoinao. Mandrosoa ry Elav.
Tsy nilaza hadalana izy fa nilaza naoty hadalana. Ary marina ny teniny, rehefa novidian'ny Canonical i Kubuntu, mpanamboatra 1 monja no, ivelan'ny +25 ananany, noho izany dia tsy nisy fahasamihafana be ihany koa, angamba fameperana hafa, saingy tena kely, ary io mpamorona io ihany no naneho hevitra momba izany tao ny bilaoginao.
Ralehilahy, raha manomboka milaza ianao fa hadalana ilay lahatsoratra ary mifarana amin'ity:
Fa hey, ny naoty dia vita amin'ny "elav", tsy afaka miandry intsony ianao, toy ny fangatahana pears amin'ny elm.
Tsy haiko ny momba anao, fa mahay mamaky anelanelan'ny tsipika ... 😉
Haiko koa ny mamaky eo anelanelan'ny andalana, fa tena tsy hainao raha izany no fikasany, noho izany dia zavatra ifanaovana .. Mety ho izy koa no nilazany taminao fa noho ny andianteny iray izay anaovanao hevitra ao amin'ilay lahatsoratra:
"Ary manana ny porofo isika ao amin'ny Kubuntu sy Xubuntu, izay hatramin'ny nandraisan'izy ireo ny tanan'ny The Community, dia tsy voavaha .."
Na dia somary marina aza izay lazainao, raha mamaky eo anelanelan'ny andalana isika dia mety hieritreritra fa ho anao dia mitovy dika amin'ny kalitao na fanatsarana ny Vondrom-piarahamonina ary manimba ny zava-drehetra fotsiny ny orinasa iray, na dia averimberina aza izany. Tsy misy manohitra an'iza na iza aho, manandrana manazava zavatra x fotsiny aho)
Eny, azoko ny tianao holazaina, izany no antony ilazako hoe:
Fa ny tena izy dia tsy ny zava-drehetra nokasihain'ny Canonical no lasa volamena.
Ny fahafantarana fa raha misy zavatra efa vitany tsara, saingy tsy izany no izy Xubuntu y Kubuntu.. Ary miteny izany aho raha ny fijeriko azy, tena manokana .. 😉
Izany dia noho ny fitsikerana ny naotinao dia mihevitra ny tenanao ho dondrona ianao (satria raha manome ny tenanao fambara ho an'ny zavatra mbola tsy nolazaiko aho dia ho an'ny zavatra io, sa tsy izany?), Efa misy ny olanao ve.
Saingy satria nilaza izany ianao, eny, satria tiako ho eo alohako ianao, dia azo antoka fa tsy io irery no nolazaiko taminao.
tsy mitonona anarana> / dev / null
hahaha, inona no tsy mety amin'ity iray ity!?
Elav ho anao ity: manaja anao aho ary manaraka foana. Tiako ny famolavolana ny bilaogy sy ny fampahalalana momba azy. Tsy nampiasa fizarana maro isan-karazany aho, miaraka amin'ny LMDE KDE aho, saingy mieritreritra aho fa na inona na inona tianay, dia tokony hitandrina ny fon'ny fanehoan-kevitra. Raha tsy mitovy hevitra aminao aho. matokia fa tsy hiantso anao hoe adala aho. Efa lasa ela be ilay ohabolana: ho an'ny tsiro dia misy loko. Mandrosoa ry Elav.
Miezaka manaja ny hevitry ny tsirairay aho, amin'ny hevitro sy ny lahatsoratro. Raha lahatsoratra hevitra dia lozika fa maro no mety tsy hanaiky ahy, fa hoy ianao hoe: Raha tsy mifanaraka dia tsy ilaina ny manafintohina ... ny mitranga dia miafina ao ambadiky ny nick ny fanaovana azy, ary tsy asehon'izy ireo ny tarehiny .. ary tsy marina izany, sa tsy izany?
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra ..
elav ry zokiolona a, aza mijery azy akory, jereo ny anarany eo am-piasana, ka tsy mendrika ny milamina (jereo hoe iza no milaza anao hehe). Ankehitriny dia hanaiky ny kubuntu amin'ny solosainan'ny vadiko aho satria ny mini mia an'ny ram 1 gig dia tsy hitako hoe ny habeny
Eny, mandraka androany (nomen'izy ireo ahy Dell Vostro tany am-piasana) Nampiasako Kubuntu sy Debian KDE tamin'ny Netbook misy RAM 1GB ary be dia be 😀 Mila manatsara zavatra vitsivitsy fotsiny ianao, saingy niasa tamin'ny vokany 😀
Fanontaniana elav, nahoana ianao no nampiasa kinova 12.04 fa tsy 12.10 ?.
Ah, tsotra izany:
1- Satria manana fitaratra eo an-toerana an'io kinova io aho
2- Satria LTS ary 12.10 dia tsia
3- Noho ireo antony roa voalohany 😀
Ny faha-2 heveriko fa tsy mitombina izany aminao, na dia tsy fantatro aza ianao tsy mino aho fa hampiasa ilay kinova mitovy amin'ny 5 taona ho avy !!! xD
Hahaha, marina ny anao ..
Salama elav 😀 Tamin'ny farany dia nandao an'i debian aho ary nifindra tany amin'ny arch xD Voalohany dia nieritreritra ny kubuntu araka ny nolazainao aho, fa tamin'ny farany dia nisafidy andohalambo aho noho ny tahotra sao feno entana ny kubuntu. Noheveriko fa tsy hampiasa memorya kely kokoa izy io, fa mandany ahy mitovy amin'ny debian (ram 170mb)
Nampiasa libreoffice aho taloha, saingy mieritreritra aho fa hanandrana ny calligra (namoaka kinova vaovao izy ireo) fa ho an'ny .doc kosa hampiasa abiword aho. Heveriko fa tsara ny nataoko?
Arch !! Tsara .. Eny, ampiasao izay mety indrindra amin'ny .doc .. Andramo toy izany koa amin'ny Calligra, angamba nihatsara io kinova io tamin'io lafiny io.
Mbola tsy manokatra azy ireo koa ny sisa, ary tsy manondrana any amin'ny dokotera koa. Fa ho an'ireo zavatra ireo dia hampiasa abiword aho, ny sisa calligra 😀
Etsy ankilany, caledonia dia toa tsara kokoa amin'ny 4.10 noho ny tamin'ny 4.8 😀
Etsy andanin'izay, manandrana misoratra anarana aho ary tsy hamela ahy xD
Mmm hafahafa be.
Anonymo dia hoy izy:
Toa tsara be !! 😀
Valiny tamin'i Anonymo
Raha nitondra fanovana be dia be ho antsika ny KDE 4.10 ary manao tsara lavitra noho ireo kinova teo aloha aho, dia tsikaritro fa mihaingo kokoa izy io ary mandeha haingana be na dia 1GB aza 🙂
Salama, heveriko fa nahomby tamin'ny zava-drehetra ianao ... na saika 😉 ny marina, eny, misy fanatsarana miharihary satria tsy nahatratra intsony ny canonika ... ny "nepomuk" tena manan-danja indrindra, narary an-doha foana izany ary ankehitriny dia miaina tanteraka izy…. Nanana "fa" niaraka tamin'i kubuntu foana aho nilaza fa mifanaraka amin'ny "distro tonga lafatra" izany ary ankehitriny milaza am-pahatsorana tsy misy tahotra aho, tsy fantatro izay hitranga fa nihatsara be…. ny tsy haiko raha ekeko dia tianao ny hisarahana amin'ny repositories ubuntu ... ho ahy dia fanampiny ho an'ny olona avy amin'ny OS hafa ... ho an'ny fanohanana ary izay, ny tutorial ubuntu rehetra dia miasa ho an'ny kubuntu ihany koa ... arahaba namana !!
Rehefa miresaka momba ny fanasarahana azy amin'ny repositories Ubuntu aho dia ny fitazonan'izy ireo tahiry miaraka amin'ny fonosana KDE sy ireo "ilaina" ... izay tsy miankina amin'ny famoahana isaky ny 6 volana .. 😉